उच्च दबाव पु फोम स्प्रे फोमिंग मिसिन अमेरिका पठाउन - बोबो मिसिन कं, लिमिटेड.
उच्च दबाव पु फोम स्प्रे फोमिंग मिसिन अमेरिका पठाउन
BDF-द्वितीय वायवीय उच्च दबाव पु फोम छिडकाव मिसिन साइट-कामको लागि डिजाइन छ, शुद्धता नाप्ने संग, पनि मिश्रण, चल्ने र पोर्टेबल संरचना र लागत र प्रदर्शन को ब्यालेन्स. हिमाचल प्रदेश फोम छिडकाव मिसिन व्यापक पर्खाल लागि प्रयोग गरिन्छ, छत, फ्रिज, र बक्स, पाइप इन्सुलेशन उद्देश्य.
6-9 किलो / मिनेट
अधिकतम. भौतिक तापमान
अधिकतम. ताप नली लंबाई
1-	वायवीय मोटर
को वायवीय मोटर डबल निर्देशन कामको लागि नवीनतम निर्देशन-परिवर्तन अपनाउने, थप स्थिर प्रदर्शन बिजुली एक तुलना छ, जटिल साइट-काम अवस्था लागि उपयुक्त.
2-	उच्च सटीक अनुपात पंप
अनुपात पंप स्टेनलेस स्टील देखि बनेको छ, छाप गर्न घर्षण कम गर्न, मेशिन जीवन लामो पार्नू. DOP लागि तेल ट्यांक संग सुसज्जित को स्क्रैप सामाग्री सफा गर्न सल्वैट.
3-	मुख्य मिसिन ताप सिस्टम
मुख्य मिसिन अलग एल्यूमीनियम हीटर अपनाउने, शक्तिशाली ताप पल्ट संग सुसज्जित राम्रो ताप क्षमता लागि, हिउँदमा कम तापमान कामको लागि उपयुक्त. नम्बर प्रदर्शन संग सिस्टम तापमान नियन्त्रण, ठ्याक्कै तापमान नियन्त्रण गर्न नाप्ने र अधिभार संरक्षण प्रणाली संग.
4-	नली ताप सिस्टम
दुई नली नवीनतम ताप प्रविधि भित्र राख्यो संग अलग गरम छ, यो परम्परागत भन्दा धेरै राम्रो छ, सामाग्री सुनिश्चित गर्न मिश्रण र छिडकाव अघि सर्वश्रेष्ठ तापमान र चिपचिपाहट छ.
को GZI श्रृंखला स्प्रे बन्दूक संग सबै भन्दा लोकप्रिय मोडेल छ 10 वर्ष मार्केटिङ पहिचान. जो कम लागत स्थिर प्रदर्शन को लागि साथ कायम छ. धेरै 20,000 यस्तो स्प्रे बन्दूक को टुक्रा भन्दा बढी प्रयोग गरिएको छ 36 राम्रो प्रतिक्रिया संग देशहरूमा.
जडान नली बन्दूक स्प्रे गर्न ताप नली जडान गर्न प्रयोग गरिन्छ, जो उच्च दबाव रबर नली बाट बनेको छ. जडान नली संग, स्प्रे बन्दूक को सञ्चालन थप प्रकाश र सुविधाजनक हुनेछ .
को ताप नली छिडकाव अघि नली बगिरहेको बेला कच्चा माल गर्मी प्रयोग गरिन्छ, जो राम्रो फोमिंग परिणाम प्राप्त गर्न सही तापमान राख्न सक्नुहुन्छ. एक पाली र आईएसओ लागि दुई नली सहित ताप नली सेट, र ताप तार, केबल भित्र नियन्त्रण, मानक कन्फिगरेसन रूपमा मिसिन साथ सँगै प्रस्ताव गरिनेछ. मानक लम्बाइ छ 15 मीटर लामो, जो प्रति आवश्यकताहरु आफ्नो रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ.
स्प्रे फोम मिसिन doesn \_ 'टी पोर्टेबल आवेदन को लागि सामाग्री ट्यांक सुसज्जित. त्यसैले रुचाउने पंपों लगातार कामको लागि ठूलो स्टील ड्रम देखि सामाग्री अप चूसना गर्न आवश्यक छन्. यी सबै पम्प घर हो लामो समय स्थिर काम सुनिश्चित गर्न गुणस्तर नियन्त्रण संग बनाउन.
हाम्रो परीक्षण ल्याब
ठूलो उत्पादन मा मिसिन लागत बचत र आफ्नो मूल्य कम. र द्रुत ढुवानी लागि स्टक मा मिसिन.
प्रमुख भागहरु राम्रो गुणस्तर नियन्त्रण र समय ढुवानी हाम्रो मशीनिंग केन्द्र द्वारा निर्मित गर्दै.
अर्को : यूएई नालीदार धातु पाइप मेसिन posttension पाइप बनाउने लागि बक्र नालीदार धातु पाइप, सर्पिल नालीदार पाइप मिसिन, posttension पाइप बनाउने मिसिन
चिनियाँ बोबो exuberant र जोडदार अर्थ. पछिल्लो दुई दशक मा लगातार प्रगति र विकास संग, अब बोबो मिसिन एचभिएसि र प्रशीतन उद्योग मा अग्रणी मिसिन निर्माता र समाधान आपूर्तिकर्ता बन्ने छ.